linguiçaမှအမျိုးမျိုးသောပီဇာချက်ပြုတ်နည်းများ - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ linguiçaမှ '' အမျိုးမျိုးသောပီဇာချက်ပြုတ်နည်းများ - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
linguiçaမှအမျိုးမျိုးသောပီဇာချက်ပြုတ်နည်းများ - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
ပီဇာကမ္ဘာပေါ်မှာရေပန်းစားတဲ့ဟင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏ပါဝင်ပစ္စည်းများတစ်ဦးချင်းဦးစားပေးအညီကွဲပြား, ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသောပေါင်းစပ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အောက်တွင်ကျနော်တို့linguiçaမှဝက်အူချောင်းအမျိုးမျိုးတစ်အရသာပီဇာပြင်ဆင်ထားရန်အချို့အတွေးအခေါ်များနှင့်ချက်ပြုတ်နည်းများကိုတင်ပြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်!
အခြေခံမုန့်စိမ်းကအမြဲတမ်းအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်: မုန့်ညက်, တဆေး, ရေ, ဆားနဲ့သံလွင်ဆီ။ ဒီအခြေခံပေါ်မှာ, သငျသညျရာသီသို့မဟုတ်အခြောက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျိုးမျိုးကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ: oregano, စမုန်ဖြူသို့မဟုတ်ပင်စိမ်း, တကကွဲပြားခြားနားတဲ့ထိပေးရ။ ကိုပြင်ဆင်ပင်ပီဇာမုန့်စိမ်းပြည်ကြီးငါးမှင်အတွက်ဥပမာ, ရှိပါတယ်။
ပွား၏ကျန်အချိန်နှင့် mode ကိုလည်းတဦးတည်းစာရွက်မှအခြားမှကွဲပြား, နှင့် disc ကို၏အထူတဲ့အခါမှာမုန့်စိမ်းရဲ့ Display ကို။ အဆင့်များအတိုင်းလိုက်နာခြင်းနှင့်အချိန်ကိုစောငျ့ရှောကျဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါဟာဖြစ်ပါတယ် ကစော်ဖောက်ခြင်း.
သင်သည်သင်၏ပီဇာကိုပိုနှစ်သက်ပါလျှင်အစားဖြစ်ပါသည် ပြတ်သားခြင်း, Battery ကိုပြီးတော့ဒဏ်ငွေပါလိမ့်မည်။ သင်ကပျော့ပြောင်းပြီးနှင့်သိပ်သည်းဖြစ်လိုလျှင်မည်သို့ပင်ဆို, က Battery ကိုထူဖို့ဦးစားပေးမည်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါပီဇာ၏ငံပြာရည်အဘို့အကြောင့်အစဉ်အလာကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ခရမ်းချဉ်သီးနှင့် mozzarella ငံပြာရည်။ သို့သော်အီတလီအချို့ဒေသများအတွက်ပီဇာလည်းဒိန်ခဲသို့မဟုတ်ခရမ်းချဉ်သီးခြင်းမရှိဘဲပြင်ဆင်ထားကြသည်။
အဆိုပါပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ကျန်များအတွက်, ဒီကသင်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့်သင့်လှုံ့ဆော်မှုအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ ဝက်ပေါင်ခြောက်, မှို, သံလွင်သီးများနှင့်အန်ချိုငါး၏ bits သည်, သင်မူကားအသားအမျိုးမျိုးတို့ကိုပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်: အရှိဆုံးရိုးရာများမှာ ရေထွက်အစားအစာ နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ။ အရာအားလုံးဥပမာပီဇာlinguiçaမှာလည်းရှိပါတယ်, ဖြစ်နိုင်သမျှပါ!
1 ခွက်ကိုမုန့်ညက် (200 ဂရမ်)
1 လက်ဖက်ရည်ဇွန်းဆားကော်ဖီ (5 ဂရမ်)
ရေပူ၏ 1 /2ခွက်ကို (100 ml)
2 ဇွန်းသံလွင်ဆီ (20 ml)
1 နှင့် instant စားတော်ဝန်ရဲ့တဆေး (7,5 ဆ) ၏တစ်နှစ်ခွဲလက်ဖက်ရည်ဇွန်း
1 သေးငယ်တဲ့ကြက်သွန် (30 ဂရမ်)
1 ခွက်ကို mozzarella (100 ဂရမ်)
အရွက် ဒုံးပျံ (မြည်းစမ်းရန်)
1 ခွက်ကို ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ် (100 ဂရမ်)
မုန့်စိမ်းကိုပြင်ဆင်ခြင်းငှါ, ခြောက်သွေ့ပါဝင်ပစ္စည်းများရောထွေး, တဖြည်းဖြည်းရေ add နှင့်ရေနံ။ တစ်ဦးယူနီဖောင်းများနှင့်ချောမွေ့ဘောလုံးကိုသည်အထိရောထွေးနှင့်လက်နှင့်အသော့ပွငျ။
ဒါကြောင့် (1h30 ခန့်) volume ထဲမှာနှစ်ဆအထိ (ကရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်အထည်နှင့်အတူ) ဖုံးလွှမ်းမုန့်စိမ်းချန်ထားပါ။
ဤအတောအတွင်း ဒယ်အိုးအတွက်ဝက်အူချောင်းချပ်ဝတ် နှင့်လှည့်လောက်5မိနစ်ချက်ပြုတ်။
ယင်းကိုအဓိကအားထားနှင့်ဆေးကြောပါ Remove arugula ။
မုန့်စိမ်းအဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါ, အလုပ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အခြို့သောမုန့်ညက်ထားလိုချင်သောပုံသဏ္ဍာန်သည်အထိသင်တို့လက်နှင့်အတူကပြန့်နှံ့။ သငျသညျလညျးမိမိလက်သီးနှင့်အတူလေထဲတွင်ဖွဲ့စည်းလို့ရပါတယ်။
ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်ထားပါ။ မဆားများပါဝင်သည်လျှင်, သင်အနည်းငယ်ထည့်နိုင်သည်။
အပိုင်းပိုင်းသို့မဟုတ်ခြစ်သို့ mozzarella ထည့်ပါ။
တစ်ဦး preheated မီးဖို၌မိနစ် 200 မှ 15 စဉ်အတွင်းကွတ်20ºC.
, မီးဖိုမှဖယ်ရှားရန် arugula ၏အရွက်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ဝတ်ပြုကြလော့။
2 ခွက်မုန့်ညက် (200 ဂရမ်)
Oregano ဆားနဲ့ခြောက်သွေ့တဲ့ (သင့်အရသာအရ)
1 /2ခွက်ကိုပူနွေးတဲ့ရေ (100 ml)
1 နှင့်တဆေးကိုတစ်နှစ်ခွဲဇွန်း (15 ဂရမ်)
3 ဇွန်းသံလွင်ဆီ (30 ဂရမ်)
2 ကြက်သွန်နီ (60 ဂရမ်)
1 ငရုတ် အနီရောင် (30 ဂရမ်)
1 အစိမ်းရောင်ငရုတ်ကောင်း (30 ဂရမ်)
5 သို့မဟုတ်6linguiças (30 ဂရမ်)
(သင့် option ကိုမှာ) ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်
mozzarella ဒိန်ခဲ (1 ဆ) ၏ 150 ဖလား, ဝက်
ဆား, ငရုတ်ကောင်းနှင့်သံလွင်ဆီ (သင့်ဦးစားပေးပေါ် မူတည်. )
မုန့်စိမ်းကိုလုပ်ဖို့, မုန့်ညက်, မုန့်ဖုတ်အမှုန့်, oregano နှင့်ဆားရောမွှေပါ။ တဖြည်းဖြည်းနွေးရေနဲ့ရေနံချက်ထည့်ပါ။ အချောသည်အထိပွား။
ဤအတောအတွင်း မီးဖို၌ငရုတ်ကောင်းထား။ အရေပြားကိုမီးရှို့သောအခါနီးပါးအနက်ရောင်, မီးဖိုကနေဖယ်ရှားအနည်းငယ်အေးမြပါစေ။
ခွံ strips တွေထဲသို့ငရုတ်ကောင်းနှင့်ညှပ်။
ဒယ်အိုးထဲမှာသံလွင်ဆီတစ်စက်လောင်း ကြက်သွန်အညိုရောင်ရန်, ထို့နောက်ငရုတ်ကောင်းနှင့်ရာသီထည့်ပါ။ အဆိုပါလိုက်သည်ကိုဝက်အူချောင်းထည့်ပါ။ စာအုပ်။
မုန့်စိမ်းအဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါ, တစ်ဦးကိုလှိမ့ pin ကိုအတူကပြန့်နှံ့။ သင်သည်သင်၏အဆင်ပြေစေရန်တစ်ပါးပါးသို့မဟုတ်ထူငါးပိမှာလေ့ကျင့်ပေးနိုင်သည်။
ထိပ်ပေါ်မှာခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်ကိုတင်နှင့် (သင်တစ်ဦးဖြီးသုံးပြီးဤသို့ပြုနိုင်သည်) အညီအမျှပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။
ထိပ်ပေါ်မှာဒိန်ခဲချပ် mozzarella ချထားပါ။
တစ်လှည့်လည်မှိုအတွက်ပီဇာကိုတင် နှင့် 20 ° C တို့မှာ preheated မီးဖိုတဖို၌ 200 မိနစ်အကြောင်းကိုချက်ပြုတ်
ပီဇာပိုပြီးအရသာရောက်စေဖို့4နည်းလမ်းများ
အဆိုပါပီဇာက appetizing မသာသောကွောငျ့, ကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးအစားအစာတစ်ခုဖြစ်တယ်, ဒါပေမယ့်အများကြီးကွာခြားမှုရှိပါတယ်။ အကြောင်းမူကား, Read more »
parsley, ကောင်းတစ်ဦးသည်ကျောက်ကပ် drainer
အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အလျှော်နှင့်အတူပရိုတိန်းဖျော်ရည် - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
7 သည်အောက်တိုဘာ 14 - BGR အတွက်အခမဲ့ iPhone ရောင်းချခဲ့သည်